Low tembiricha assembley bvunzo - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Yakadzika tembiricha gungano bvunzo yakashandiswa kuongorora kugona kweanobatanidza kuve nemukana unokodzera wemagetsi kusangana pasi pasi tembiricha. Kana chigadzirwa chikafumurwa kune yakaderera tembiricha nharaunda kwenguva yakareba, iko kuita, basa, mhando, uye hupenyu hwechigadzirwa chinogona kukanganiswa. Izvi zvinoda kuyedzwa kwakadzika-tembiricha kwechigadzirwa kuti uone kushomeka kwechigadzirwa kumatembiricha akaderera.
Jera enderera bvunzo pane pazasi zvigadzirwa
-Kuderera, yepakati & yakakwira voltage shear musoro bhaudhi lug.
Anokwanisa kuputira kuboora chinongedzo chinofanirwa kuve neyakagadzikana yemagetsi kusangana pakati pevafambisi kana vari pasi pasi pekupisa. Takariisa mukamuri rechando uye ndokuyedza kubatana kwayo kwemagetsi kana torque yenzungu iri kugadzirisa.
Yedu bvunzo chiyero maererano neCENELEC, EN 50483-4: 2009, NFC 33-020, DL / T1190-2012 yemagetsi ekuparadzira zvishongedzo. Isu tinoshandisa kutevedzera zviyero bvunzo pane zvigadzirwa zvitsva usati watanga, zvakare neyemazuva ese kudzora mhando, kuitira kuti uve nechokwadi chedu mutengi anogona kugamuchira zvigadzirwa zvinosangana nemhando yepamusoro zvinodiwa.